ဌာနချုပ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အောင်လံတင်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
စက်တင်ဘာ ၉၊ နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အောင်လံ တင်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၉-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် (၈)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပါတီဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များမှ နေပြည်တော် မြို့မဈေးအတွင်း နှာခေါင်းစည်းများ လှူဒါန်း
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၆။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဌာနချုပ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယနေ့ညနေ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူအများအပြား ဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိသည့် မြို့မဈေးအတွင်း ဆေးဘက်သုံး နှာခေါင်းစည်း (၄၀၀၀)ကို ဖြန့်ဝေလှူဒါန်း ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၇၊ နေပြည်တော်
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဌာနချုပ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် တကျော့ပြန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကာလအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်ကြီးများ စာသင်တိုက်ကြီးများ ဆွမ်းကွမ်းဝေယျာဝစ္စမခက်ခဲစေရေးအတွက် ဆွမ်းဆန်တော်နှင့် ဆွမ်းဟင်းလျာရိက္ခာခြောက်များအား ပို့ဆောင် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းလျက်ရှိရာ ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီက နေပြည်တော် ဥတ္တရမြို့နယ် ဝိဇိရာနန္ဒဓမ္မစင်တာတွင် သီတင်းသုံးတော်မူသော သံဃာတော် ၇၄ ပါးအတွက် ရည်စူးလျက် ဆွမ်းဆန်တော် ၄ အိတ်၊ အာလူး ၃၂ ပိဿာ ၊ ပကြာဇံ ၁၀ ပိဿာ၊ ခရမ်းချဉ်သိ်း ၁၀ ပိဿာ၊ ဆွမ်းဟင်းလျာရိက္ခာ ငါးခြောက် ၄၅ ပိဿာ စုစုပေါင်း တန်ဖိုး ၇ သိန်းကျပ်အား သွားရောက်ပို့ဆောင်ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များမှ ဒက္ခိဏသီရိဈေးအတွင်း နှာခေါင်းစည်းများ လှူဒါန်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနချုပ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယမန်နေ့ညနေ၌ ပြည်သူအများအပြား ဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိသည့် ဒက္ခိဏသီရိဈေးအတွင်း ဆေးဘက်သုံး နှာခေါင်းစည်း (၁၀၀၀)ကို ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခဲ့သည်။
မနက်ဖြန် စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဌာနချုပ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့သည် နေပြည်တော်မြို့မဈေးတွင် နှာခေါင်းစည်းများ ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဌာနချုပ် အဋ္ဌမအကြိမ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၆
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနချုပ်၏ အဋ္ဌမအကြိမ် ၀ါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့် နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်ခြင်း အလှူမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲက ပါတီဌာနချုပ်ရုံးတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားကို နမောတဿ သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကြွရောက်တော်မူကြသော ဆရာတော်သံဃာတော်များထံမှ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ခြင်း၊ ဆရာတော်များမှ ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်ချီြး့မှင့်ခြင်း၊ ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် ပါတီတာဝန်ရှိသူများက ၀ါဆိုသင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့အား ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ပြုပြုသမျှသော ကောင်းမှုတို့အား ရေစက်ချ အမျှဝေခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုကာ အခမ်းအနားအား ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးနှင့် ဇနီး၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ရီ၏ ဇနီး၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးသက်နိုင်ဝင်း၊ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူးများဖြစ်သည့် ဒေါက်တာကျော်ကျော်ဌေး၊ ဒေါက်တာဒေါ်စန်းစန်းနွယ်၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးဝေလွင်နှင့်ဇနီး၊ ဦးသောင်းအေးနှင့်ဇနီး၊ ဦးသူရိန်ဇော်၊ ဦးအောင်တင်မြင့်၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများနှင့် ဦးစီးရုံးအဖွဲ့ဝင်များက ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးမှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Christian LECHERVY အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
သြဂုတ် ၁၈၊ နေပြည်တော်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr.Christian LECHERVY အား သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်နေ့၊ (၁၄း၃၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဌာနချုပ်၊ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ပွညျခိုငျဖွိုးကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို ဗဟိုဦးစီးစနဈဖွငျ့ စီစဈရှေးခယျြခွငျးမဟုတျပဲ ပွညျသူမြား စိတျကွိုကျ ရှေးခယျြထားသူမြားဖွဈ
ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီမှ ရှေးခယျြထားသညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဗဟိုဦးစီးစနဈဖွငျ့ ခြုပျကိုငျရှေးခယျြထားခွငျး မဟုတျပဲ ဒသေအကြိုး ပွညျသူ့အကြိုးဆောငျရှကျနိုငျပွီး ဒသေခံတှနှေဈကွိုကျမညျ့ အဆိုပွုထားသူမြားကိုသာ ဦးစားပေး ရှေးခယျြထားတယျလို့ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒေါကျတာနန်ဒာလှမွငျ့က ပွောဆို လိုကျပါတယျ။
ဒီကနေ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီရဲ့ ဌာနခြုပျမှာ ပွုလုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ဒေါကျတာ နန်ဒာလှမွငျ့က အခုလို ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ ဒုတိယသံအမတ်ကြီး H.E. Dr Michele Forsterတို့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်နှင့်အတူ နိုင်ငံတကာရေးရာ ကော်မတီဌာနမှူး ဦးမြင့်ကိုကိုတို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဌာနရုံးချုပ်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၄) ရက် မွန်းလွဲ (၂) နာရီအချိန်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (၁၀) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လယ်ဝေးမြို့နယ် ပေါက်မြိုင်ပရိယတ္ထိစာသင်တိုက်သို့ လှူဒါန်းမူများ ပြုလုပ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (၁၀) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားအား ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ် ပေါက်မြိုင်ပရိ ယတ္ထိစာသင်တိုက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ၊ ကြက်သွန်၊ အာလူး၊ လ္ဘက်ခြောက်နှင့် န၀ကမ္မ၀တ္ထုငွေများ လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ နေပြည်တော်ဌာနချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ(၂)တွင် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃နာရီတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းစိန် တင်သွင်းသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို တာဝန်မှရုပ်သိမ်းပေးရေး အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များဖြစ်ကြသော ဦးသောင်းအေး၊ ဦးမောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာမောင် သင်းနှင့် ဦးစိုင်းထွန်းစိန်တို့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရခြင်း အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပြီး မီဒီယာများ၏မေးမြန်း ချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအား ညနေ ၄နာရီ ၁၅မိနစ်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းပွဲဆွေးနွေးချက်များအား ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်။